Antony 8 tokony hodinihina rehefa misafidy rafitra fanairana fanoherana ny halatra
1. ny tahan'ny detection Ny tahan'ny detection dia manondro ny tahan'ny fitiliana fanamarihana tsy misy marika amin'ny marika rehetra amin'ny faritra fanaraha-maso. Izy io dia fampisehoana fampisehoana tsara handanjalanjana raha azo itokisana ny rafitra fanairana fanoherana ny halatra amin'ny fivarotana lehibe. Ny tahan'ny fahitana ambany dia matetika koa dia midika ho sandoka avo ...
Ny fampandrenesana miady amin'ny halatra amin'ny fivarotana fitafiana dia diso fampilazana ary saika nalaina ho mpangalatra akanjo
Mitsidika toeram-pivarotana lehibe izahay ary hita eo am-baravaran'ny mall ny varavarana fanairana fanoherana ny halatra. Rehefa mandalo eo amin'ilay fitaovana ny entam-by miaraka amina vorom-panafody, dia haneno mafy ny fanairana fanairana. Misy koa ny olona nanao korontana noho io fanairana io. Ho an'ny exa ...
Ny fitsipika fototry ny entam-barotra EAS sy ny tondro fampisehoana valo
EAS (Electronic Article Surveillance), fantatra ihany koa amin'ny rafitra fisorohana ny halatra entona elektronika, dia iray amin'ireo fepetra fiarovana be mpampiasa ampiasaina amin'ny indostrian'ny varotra lehibe. Ny EAS dia natomboka tany Etazonia tamin'ny tapaky ny taona 1960 s, izay nampiasaina tamin'ny sehatry ny fitafiana, nanitatra ...
Vahaolana fiarovana rafitra
Ⅰ Ireo toe-javatra azo antoka ankehitriny ao amin'ny magazay amin'ny fitafiana Avy amin'ny fanadihadiana ny fomba fitantanana: matetika ireo magazay dia tsy manana birao fanampiana, fitoeram-bokatra, ho an'ny maody tsy voatery. Tsy hifehy ny entan'ny mpanjifa izany. Toy ny kitapo hoditra, akanjo, kiraro ary satroka, ho lasa halatra. Eo amin'ny oth ...
Tongasoa eto amin'ny Internet International of Things Exhibition faha-15
Ity fampirantiana ity dia hatao amin'ny 21 aprily ao amin'ny Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, ny IOT dia midika hoe 'The Internet of Things', no sehatra Internet of Things Explorer manaraka miaraka amina fiainana manokana, azo antoka, mora, haingana sy matanjaka amin'ny fampifanarahana hendry vaovao Fampiharana IOT ...
Inona ny EAS?
Inona ny EAS? Ahoana no itananany andraikitra miaro? Rehefa mandefa any amin'ny magazay lehibe ianao, efa sendra toe-javatra nisehoan'ny varavarana nivoha teo am-baravarana? Ao amin'ny wikipedia dia milaza fa ny fanaraha-maso ny lahatsoratra Elektronika dia fomba teknolojia iray hisorohana ny fanondrotana fivarotana amin'ny fivarotana antsinjarany, pilferage ...
Maninona ianao no tsy afaka mangalatra amin'ny milina tsy manan-katao?
Maninona ianao no tsy afaka mangalatra amin'ny milina tsy manan-katao? Efa nampiasa milina fivarotana tsy mitantana ve ianao? Raha ampitahaina amin'ireo masinina mpivarotra olona tsy nisy olona dia tsy hisy henatra intsony amin'ny "...
Teknolojia RFID ahafahan'ny fitantanana ny faritra misy ny fiara
Teknolojia RFID ahafahan'ny fitantanana ny faritra misy ny fiara Miaraka amin'ny fitomboan'ny tinady amin'ny fampivoarana toekarena sy ny fampiroboroboana sy ny famadihana fiara mifono angovo vaovao, ny fahafaha-mamokatra fiara manerantany dia mitombo isaky ny ...
Tapaho ny fahendren'ny mpivarotra, ahoana no tokony hisamboran'ny orinasa ny fisehoan'ny mpivarotra vaovao?
Tapaho ny fahendren'ny mpivarotra, ahoana no tokony hisamboran'ny orinasa ny fisehoan'ny mpivarotra vaovao? Talohan'ny nidiran'i Sina tamin'ny dingana vaovao zero Wei, dia efa niaina ny fahaterahan'ny indostrian'ny mpivarotra nentim-paharazana, ny fananganana mpanjifa na ...
Tranga maromaro amin'ny vahaolana etagtron
Tranga marobe amin'ny vahaolana Etagtron Tommy Hilfiger no namoaka ny vahaolana momba ny akanjo ohatra an'ny Etagtron RFID, Tommy Hilfiger, ho iray amin'ireo marika manerantany, dia manolotra fomba, kalitao ary sanda ho an'ny mpanjifa manerantany ....